Updated: 2016-02-11 15:37
ဥရဲရှီနော့ရေပးစမ်းသမိုင်း ဟာ တော်တော် ကြာညောင်း ပြီးတော့ နာမည် ကလဲ တော် တော်လေး အသွင်းဆန်း ပါတယ်၊ အရင် တုန်း က စစ်သူကြီးတွေက တိုက် ပွဲ ကနေ ပြန် လာ ရင်းဒီနေမြေ ကို ၀င် ကြည် ရာ က ပွက် ပွက် ဆူ နေတဲ့ ရေ...
Updated: 2016-02-11 13:43
ဟိနဂုရေပူစမ်း ဟာအိုးအဲ နှစ် ၁၄၀၉ ခု နှစ် ဟမဒ ရော့ခုရော က အဖေ ရဲ့ ဓါးဒဏ်ရာ ကို သက် သာအောင် ဆို ပြီး နတ်မင်း ဆီမှာ ဆု တောင်း လိုက် တော့ အိပ်မက် ထဲ မှာပေါ်လာခဲ့ တယ်။အိပ် မက် အရ အဲ့ ဒီ နေရာ ကို သ...
Updated: 2016-02-09 19:35
ကန်းနွန်း စခုရာ ရွာကလေး
ချယ်ရီ တို့ နဲ့ နာမည် ကျော်ကြား တဲ့ အဆင့် အတန်း မြင့် မြို့ေ တာ် ကန်းနွန် ရေကန် ပန်းဥယဉ် အတွင်းမှာ တည် ရှိ ပြီးတော့ ၊ ပြင် ပ ရေပူစမ်း ၁၃မျိုး ရှိ တဲ့ ရေချိုး ကန် ကနေ ရေချို့ ကန် ကို အချိန် ယူကူး ရင်း...
Updated: 2016-02-09 19:18
မိရဇခိ အိုရောဒိုမြစ် ရေပူစမ်း (တမယုရရေပူစမ်း) ဟာဆိုရင် အိုရောဒိမြစ်မှာ တန်းစီနေတဲ့ ဟိုတယ်တို့ နဲ့ အတူ ဖွင့် လှစ် လိုက် တဲ့ ရေပူချိန် ၄၅.၆ ဒီဂရီ ရှိတဲ့ သဘာဝ ရေပူစမ်း ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ဟို တယ် မှာအပန်းဖြေ...
Updated: 2016-02-09 19:00
ဥရဲရှိနို ရေပူစမ်းမြို့ တော် ရဲ့ အဓိက လမ်းတစ်လျောက် မှာ ယုရဒို ကွင်းပြင် ကျယ် က ရှိပါတယ်။ ခြေထောက် စိမ် ရေပူစမ်းက အခမဲ့ ဖြစ် တဲ့ အတွက် လာရောက် အသုံးပြုတဲ့ လူတွေ အများ အပြားရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြေ...
Updated: 2016-02-09 18:53
ဆွတ် အဲ တ သဲ ရေ ပူစမ်း
ဆယ်ဒိုရ ခရီး နဲ့ ပိုင်းခြားထား တဲ့ ဂိုက် ကို အဓိက ထား ပြီး ဆွတ်အဲတသဲ ရေပူစမ်း ကို တစ် ပတ် ပတ် ၊ပြီး တော့ လူတွေ မသိ နိုင် သေး တဲ့ ညှို့ ယူ ဖမ်း စား နိုင် တဲ့ အင်အား ကို ထုတ် ဖေါ် မယ်။နောက် ဆုံးမှာ ရေပူ...